Fitokanana ny Sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Kirghizistan sy Armenia
NOHAVAOZINA sy nitarina ny tranon’ny sampana any Bichkek, renivohitr’i Kirghizistan. Niasa mafy nandritra ny herintaona sy tapany ireo mpiasa an-tsitrapo teo an-toerana sy avy any ivelany mba hamitana an’izany. Natao tamin’ny 24 Oktobra 2015 ny fitokanana, izany hoe iray volana taorian’ny nahavitan’ny asa. Mpanatrika 3 000 mahery tany amin’ny Efitrano Fanjakana 18 sy toerana 5 hafa no faly nanaraka an’ilay fandaharana. I Stephen Lett, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no nanao an’ilay lahateny fitokanana hoe: “Manompoa An’i Jehovah Amin’ny Fo Manontolo.” Nisy fandaharana nanatanjaka ny finoana natao ny ampitson’iny, ka nanaraka an’izany ny ankamaroan’ny mpitory tany Kirghizistan.
Notokanana tamin’ny asabotsy 14 Mey 2016 ny biraon’ny sampan’i Armenia sy ny Efitrano Fivoriambe iray ary trano fianarana amin’ny Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana. Rihana miisa 6 amin’ny trano fonenana tsara tarehy misy rihana 17 no misy an’ilay biraon’ny sampana. Mpanatrika 6 435 no nanatrika an’ilay fitokanana. Noresahina tamin’ireo lahateny ny niandohan’ny tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah any Armenia. Armenianina nifindra monina tany Etazonia taorian’ny taona 1900 no nandre ny fahamarinana voalohany. Tamin’ny 1975 tany ho any kosa vao nisy mpitory tany Armenia, tamin’ny mbola anisan’ny Firaisana Sovietika i Armenia. Vao haingana izay, dia nekena ho ara-dalàna ny fikambanan’ny Vavolombelon’i Jehovah ary natsangana ny sampana. Betsaka tamin’ireo mpanatrika no tsy nieritreritra hoe hahita zavatra hoatran’izany. Nandritra an’ilay fandaharana, dia nanaiky ny mpanatrika rehetra, niaraka tamin’i David Splane anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, hoe hatokana ho an’i Jehovah ireo trano tsara tarehy ireo. Iny no fotoana niavaka indrindra tamin’ilay fandaharana.
Ambony: Fitokanana ny sampan’i Armenia
Afovoany: Rahalahy sy anabavy manatrika an’ilay fandaharana manokana ny faran’ny herinandro
Ambany: Dihy nentim-paharazana armenianina (takarivan’ny fitokanana)